Train Travel Tips Archives | စာမျက်နှာ 13 ၏ 14 | တစ်ဦးကရထား Save
ဥရောပရထားစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်နေဖြင့်ကြည့်ရှုပါနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံ. ဥရောပ၌မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှများအတွက် quintessential နည်းလမ်းနှင့်မျှနက်နဲသောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ခရီးသွားများအတွက်မျိုးစုံနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအောင်နိုင်နိုင်အောင်အဆိုပါရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်…
အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရထား Featuring အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, Movies စောင့်ကြည့်ထက်ရထားခရီးစဉ်ကိုယူသငျသညျလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်? ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ, and tweet us at @saveatrain and tell us which ones you have seen and if you loved…
ပဲရစ်စ်နှင့်ရောမမြို့နီးပါးတိုင်းခရီးသွားမယ့်ရေပုံးစာရင်း၏ထိပ်မှာရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအံ့မခန်းမြို့ကြီးများမိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအဘို့အလူကြိုက်များ, ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအစားအစာ, လက်ရာမြောက်သောဗိသုကာနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီး. ရောမမြို့နှင့်ပဲရစ်ဝေးဆိတ်ကွယ်ရာများမှာနေစဉ်, သူတို့ကောင်းကောင်းရထားချိတ်ဆက်ထား. ဆိုလိုတာက…
သငျသညျဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်လျှင်အကြံပေးချက်များ Interrailing နှင့်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာဖြစ်နိုင်. မီးရထားလက်မှတ်၏ကုန်ကျစရိတ်, နေရာထိုင်ခင်း, အစားအသောက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဥရောပနိုင်ငံများအကြားကွဲပြားကြဘူး, ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးနည်းခရီးစဉ်ကိုခံစားဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. ကံကောင်းတာက, အခြို့သောပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ, အတွက်ရထားလမ်းခရီးသွား…
သငျသညျအနှစ်အိမ်ထောင်သက်ပါပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်နေဆဲ, တိုင်းစုံတွဲအတူတူသုံးစွဲအရည်အသွေးကိုအချိန်ထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျ. Valentine Day ကိုတစ်ခုအားထုတ်မှုစေရန်အထူးသဖြင့်ကောင်းတဲ့ဒါဟာင်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြစတင်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်…
ရထားလမ်းအားဖြင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာအလျင်သွားမပေးကြောင်းတစ်ကာလကြာရှည်အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် – ရထားအမြန်ဆုံးများမှာ, အရပျသို့အရပျမှရွေ့လျားအများစု Eco-friendly နဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလက်မှတ်စနစ်ကစည်းရုံးရေးထဲကနာကျင်မှုကိုယူပေမယ့်…
တိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေခရီးသွားလာ, သို့မဟုတ်မြို့မြို့မှ, ရထားကအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံနှင့် Voyages ဤသို့ပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအကြီးအကျယ်ခရီးထွက်အကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံထားတယ်, သို့သော်, များစွာသောဥရောပရထားလမ်းကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါပြောင်းရွှေ့လာကြသည်…
အီတလီမှာမီးရထားခရီးနှစျသိမျ့သို့သော်အချို့အထင်ကြီးအမြင်များကိုသာပူဇော်. သငျသညျခငျြးခငျြးတစျခုအရပျမှခရီးအဖြစ်အီတလီမှာရထားယူပြီး ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာတော်တော်လေးရှုခင်းကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. အီတလီနိုင်ငံအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်,…
တစ်ဦးကရထားစီးခေတ္တနားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေး, ပြတင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ယူပြီး၏ဇိမ်ခံတန်ဖိုးထား. ခရီးသွားလာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတက်ယူနိုင်ပါသည်, ရှည်လျားသောမီးရထားခရီးပိတ်ထားခြင်းနှင့် unwind ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. အများဆုံးလုပ်ပါ…
ဘလော့ဂ်တစ်ခုမမေ့နိုင်သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားလပ်ရက်များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပမြို့သို့ရထားခရီးအတူစတိုင်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲရန်နေရာများအကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာယဉ်ကျေးမှုညဥ့်ကိုရှာဖွေနေကြသည်ရှိမရှိ, တစ်ဦးအံ့မခန်းမီးရှူးမီးပန်းများ display ကိုပါသို့မဟုတ်ယခုနှစ်ပါတီ, ကျွန်တော်တို့…